Hordhac: Crystal Palace vs Man Utd – Red Devils Oo Dooneysa Inay Difaacato Kaalinteeda 3aad %
Manchester United, ayaa waxay usafri doontaa dhigeeda Crystal Palace si ay ula dheesho kulan tirsan horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska, xili Red Devils ay dooneyso inay kusoo laabato kaalinteeda labaad.
Liverpool, ayaa hada fadhisa booskaan, taasoo leh 60 dhibcood, halka United ay ku jirto kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 59, iyadoona hadii ay ka badiso maanta Crystal Palace, tegi doonta 62 Buundo.
Hadaba, halkaan hoose waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wax walba oo aad uga baahan tahay ciyaartaan ka tirsan wareega labaad ee EPL, gaara ahaan kulamada 29, iyadoona Natiijada aad Laacib.so ka heli doonto.
Kooxda martida loo yahay ee Crystal Palace, ayaa waxaa ciyaartaan ka maqnaan doona weerar yahankeeda Wilfried Zaha, kaasoo dhaawac dhanka Jilibka ah, saalada Qaliinka waqti xaadirkaan usaaran.
Laakiin, kooxda macalin Hodgson waxay dib uheli kartaa ciyaartaan wiilasheeda kala ah: Martin Jeffrey Schlupp iyo James Tomkins, kuwaasoo dhamaantooda ka qeyb qaatay tababarkii leyskugu diyaarinayay kulankaan.
Geesta kale, Manchester United waxaa kulakaan ka maqnaan doona ciyaartoyda kala ah: Marouane Fellaini, Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic iyo Herrera, laakiin waxaa soo laaban kara Marcos Rojo, kaasoo dhaawac ahaa.
CRYSTAL PALACE: Hennessey|Wan-Bissaka, Tomkins, Kelly, Schlupp|Riedewald, Milivojevic, McArthur|Townsend, Benteke, Sorloth
MAN UNITED: De Gea|Valencia, Lindelof, Smalling, Young|McTominay, Matic, Pogba|Lingard, Lukaku, Sanchez
Kulanka: Crystal Palace vs Man United